Kunze kwemabhazi-inochengetedzwa michina yekukura yakura zvese musimba rekuchengetera pamwe nekumhanya pamakore gumi apfuura. Kutenda nekukurumidza kufambira mberi mu flash tekinoroji (kusanganisira kuuya kwe3D NAND neNVMe) pamwe nekumhanyisa inomiririra nzvimbo (senge Thunderbolt 3 uye USB 3.x), isu ikozvino tave nemichindwe-saizi flash-yakavakirwa ekuchengetedza michina inokwanisa kuendesa 2GBps + kumhanya. Nepo iko kumhanya kuchikwanisika neThunderbolt 3, mashoma-musika zvigadzirwa zvinofanirwa kuvimba neUSB. Kuongorora uku kunokurukura mashandiro uye hunhu hwezvazvino zvipo zveWest Digital (2020 katalog) inotsigira USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) kumhanya.
Yakakwira-inoshanda ekunze ekuchengetedza michina inoshandisa chero Thunderbolt 3 kana USB 3.2 Gen 2 yeiyo inomiririra interface. Chinyakare SATA SSDs (inogutsa pa560 MBps) haigone kutora mukana izere bandwidth inopihwa ne USB 3.2 Gen 2. Muna 2020, takaona musika uchifamba en-masse kuNVMe SSDs kuseri kwe USB 3.2 Gen 2 bhiriji rechikamu chemusika ichi. .
Western Dhijitari yakaunza rutsigiro rweNVMe kune yavo My Passport SSD chigadzirwa mutsara mwedzi wapera. Nhasi, kambani iri kutanga iyo SanDisk Yakanyanya Inotakurika SSD v2 (pamwe neiyo Yakanyanya PRO Inotakurika SSD v2). Iyo Yakanyanya v2 ine chekufarira pano, sezvo zvese zviri zviviri zvakasethwa uye mashandiro ehurongwa anoenderana neiyo Yangu Pasipoti SSD. Iyo kambani yakatipa isu yekudzokorora sampuro ye1TB vhezheni yeMy Passport SSD pamwe neSanDisk Extreme Portable SSD v2.
Izvo zvigadzirwa zviviri zvakaputirwa zvakafanana uye zvese zvinouya nepfupi (15cm) USB 3.2 Gen 2 Type-C kune Type-C tambo. Iyo Type-C kune Type-A adapta inopihwa, yakafanana neiyo ine yapfuura chizvarwa chekunze maSSD kubva kuWestern Dhijitari. Iyo yekugadzirwa kwemaindasitiri emayuniti aya akatosiyana, yega yega inokwezva kune yayo yekutengesa musika. Iyo carabiner chiuno muSanDisk Extreme / PRO mutsetse wakaratidza kuve unobatsira mubatsiri kune gumstick fomu-chinhu chakamanikidzwa nekushandiswa kweM.2 NVMe SSD. Izvo zvave zvichinyanya kukosheswa nevemukati vagadziri (vatevedzeri uye vhidhiyo vhidhiyo) vachienda. Iyo My Passport SSD ine yayo yakakomberedzwa micheto uye grooves / kuwanikwa mune akawanda mavara anogona kubata kukwikwidza kune akakosha maitiro-vanoziva vateereri. Sezvatichaona zvichidzika pasi muchikamu che'Dhivhizheni & Hunhu ', yemukati Hardware yakafanana. Zororo rese rekuongorora zvakare rinobata chimwe chinonakidza chikamu - ko iyo yemukati Hardware inotungamira kune akafanana mashandiro ekuita eayo maSSD maviri?
Mune ino ongororo, isu tinofananidza iyo SanDisk Yakanyanya Inotakurika SSD v2 uye iyo WD Yangu Pasipoti SSD (2020) vachipesana, pamwe neanotevera maDAS mayuniti atakaongorora kare.
Inokosha Portable SSD X8 1TB
Samsung Portable SSD T7 Kubata 1TB
SanDisk Yakanyanya Pro Portable SSD 1TB
Kukurumidza kuona nezve mukati memukati memidziyo yekuchengetedza inopihwa neCrystalDiskInfo.
SanDisk Yakanyanya Kutakurika SSD v2 1TBWD My Passport SSD (2020) 1TBADATA SE800 1TBCrucial Portable SSD X8 1TBHP P700 1TBLexar SL100 Pro 1TBPatriot PXD 1TBSamsung Inotakurika SSD T7 Kubata 1TBSanDisk Yakanyanya Pro Inotakurika SSD 1TBExpand All
Iyo SanDisk Yakanyanya Inotakurika SSD v2 uye iyo WD My Passport SSD (2020) inoshandisa iyo imwechete yemukati SSD - iyo Western Dhijitari SN550E. Iyo SN550 inowanikwa mune yekutengesa pasi pe WD Bhuruu branding. Isu tinotenda kuti 'E' suffix inomirira 'External' - WD yakasimbisa kuti iyo SSD iri kushandiswa yaive SN550-kirasi, uye yaive neyakajeka firmware tweaks yekushandisa sekunze SSD. Kufanana ingangoita yega yega M.2 NVMe SSD kuseri kwe USB 3.2 Gen 2 bhiriji, iyo SanDisk Yakanyanya Inotakurika SSD v2 uye iyo WD My Passport SSD (2020) inotsigira SMART passthrough uye TRIM (kunyange zvisiri pachena mu CrystalDiskInfo skrini).
Iyo gallery iri pamusoro inopa mimwe mifananidzo yevanopinda veWD Yangu Pasipoti SSD (2020). Isu tinoona kuti mativi maviri eiyo My Passport SSD clamshell akabatwa pamwechete neindasitiri-simba maviri mativi tepi. Kutsvaga kupatsanura vaviri vari pachidimbu kwakange kusingarwadze - kutaura zvazviri, ndiyo yaive nyore kutakurika SSD kutora (kubva pane ese andakange ndashanda pairi kare). Chikamu chepamusoro cheSanDisk Yakanyanya Kutakurika SSD v2 inobatirira kune yepazasi chidimbu ichishandisa akateedzana epurasitiki clip mukati medimeter - izvi zviri pachena kutora uchishandisa mapiki ekuvhura. Mifananidzo yakasarudzwa inowanikwa mu gallery iri pasi apa.
Mukati meyuniti, tinoona iyo pombi yekupisa iri mhiri kweM.2 SSD (muExtreme v2 teardown) uye imwe kudivi rekumashure (mune My Passport SSD teardown). Kunze kwekubatsira kubvisa kupisa kure, ivo zvakare vanoona kuti mabhodhi akasvinwa mukati meyakavharirwa uye anogona kumira kushamiswa uye kudedera. Mifananidzo yeASMedia ASM2362 bhiriji chip inogona kuoneka mubhodhi huru, nepo SanDisk 20-82-10023 controller ichionekwa mune M.2 SSD.
Kuongororwa kwezvikamu zveDAS pa Windows zvinoitwa neHadhesi Canyon NUC yakagadzirirwa sezvakatsanangurwa pazasi. Isu tinoshandisa imwe yekumashure USB Type-C madoko anogoneswa neAlpine Ridge controller kune ese maviri Thunderbolt 3 uye USB zvishandiso.
Kaby Lake, 4C / 8T, 3.1GHz (kusvika 4.2GHz), 14nm +, 8MB L2
ndangariro Yakakosha Tekinoroji Ballistix DDR4-2400 SODIMM
(118 GB; M.2 Rudzi 2280 PCIe 3.0 x2 NVMe; Optane)
SATA Devices Intel SSD 545s SSDSCKK512GG
(512 GB; M.2 Rudzi 2280 SATA III; Intel 64L 3D TLC)
PSU Lite-On 230W Kunze Kwesimba Simba Brick
Kutenda kuIntel kune izvo zvekuvaka zvikamu
Yedu nzira yekuongorora yezvakananga-yakasungirirwa ekuchengetedza maturusi inotora musanganiswa unonzwisisika wezvakagadzirwa uye chaiwo-epasirese mabasa. Kunyange madhivhosi mazhinji eDAS anotarisa imwe chikamu chepamusika inoshambadza manhamba ekuita akafanana uye inosangana nawo kuitira zvakajairika basa, mutsauko chaiwo unoburitswa padivi rehunyanzvi neyakaenzana mashandiro ehunyanzvi uye kushanda kwesarudzo yemafuta. Dhizaini dhizaini uye kukosha-kwakawedzera maficha anogona zvakare kuve akakosha kune vamwe vashandisi. Izvo zvakasara zvikamu mune ino ongororo zvinotora zvese izvi zvinhu mushure mekuongorora maficha eanotyaira zvakadzama.
Zvishandiso zveMidziyo uye Unhu
Usati watarisa mashandisirwo eSanDisk Yakanyanya Inotakurika SSD v2 uye iyo WD Yangu Pasipoti SSD (2020), zvinobatsira kuenzanisa iwo maratidziro kune mamwe akafanana maSSD.
Yakananga-Yakabatanidzwa Kuchengetedza Hunhu
Kuonekwa SanDisk Yakanyanya Kutakurika SSD v2 1TBWD My Passport SSD (2020) 1TBADATA SE800 1TBCrucial Portable SSD X8 1TBHP P700 1TBLexar SL100 Pro 1TBPatriot PXD 1TBSamsung Inotakurika SSD T7 Kubata 1TBSanDisk Yakanyanya Pro Inotakurika SSD 1TB WD Pasipoti yangu SSD (2020) 1TBADATA SE800 1TBCrucial Portable SSD X8 1TBHP P700 1TBLexar SL100 Pro 1TBPatriot PXD 1TBSamsung Inotakurika SSD T7 Kubata 1TBSanDisk Yakanyanya Pro Inotakurika SSD 1TBSanDisk Yakanyanyisa Inotakurika SSD v2 1TB
Bridge / Mutungamiriri ASMedia ASM2362 + SanDisk 20-82-10023 ASMedia ASM2362 + SanDisk 20-82-10023
mbaravara SanDisk BiCS 4 96L 3D TLC SanDisk BiCS 4 96L 3D TLC
simba Bhazi Rakagadzirirwa Bhazi Rakagadzirirwa
Miviri yeZviviri 52.42 mm x 100.54 mm x 8.95 mm 55 mm x 100 mm x 9 mm
IP Rating IP55 N / A
uremu 63 gramu (pasina tambo) 54 gramu (pasina tambo)
waya 15 cm USB 3.2 Gen 2 Type-C ku Type-C
Type-C Type Type-Adapter 15 cm USB 3.2 Gen 2 Type-C ku Type-C
Type-C Type Type-Adapter
SMART Passthrough Ehe Ehe
UASP Support Ehe Ehe
TRIM Passthrough Ehe Ehe
Encryption Tsigiro Hardware (SanDisk YakachengetekaAccess App) Hardware (WD Security App)
Iwo maSSD maviri ane mapfupi akapihwa akareba tambo pa15cm. Vashandisi veDesktop desktop vane USB-C zviteshi mukati mekunze kwepaneru vangangoda kuchengeta izvi mundangariro. Iwo madhiraivha anonzwa akasimba muruoko, nekuda kwavo 50g + uremu. Iyo WD Yangu Pasipoti SSD (2020) yakati rebei zvishoma kupfuura SanDisk Extreme v2, asi ese ari maviri anokwana nyore muhomwe dzekutakura kutenderera.
Synthetic Benchmarks - ATTO uye CrystalDiskMark
SanDisk inoti inomhanyisa inosvika ku1050 MBps kune maSSD maviri, uye aya anenge achitsigirwa nezviratidzo zveATTO zvakapihwa pazasi. Nehurombo, idzi nzira dzekuwana hadzina kujairika mune chaiwo-hupenyu zviitiko.
Inomhanya kumusoro kunze pa989 MBps inoverengwa uye yakatenderedza 912 MBps inonyorera iwo maSSD maviri. Pfungwa inonakidza yekucherechedza apa ndeyekuti SanDisk Yakanyanya Pro Inotakurika SSD kubva gore rapfuura yaive nenhamba dzakaenzana dzakaverengwa, asi iyo inonyora yakakwira kusvika pa929 MBps.
CrystalDiskMark, kunyangwe iri bhenji rekukanini, inopa fungidziro iri nani yehuwandu hwekuita pamwe neseti yakasarudzwa yenhamba.
Sezviri pachena kubva pamufananidzo wepamusoro, mashandiro anogona kunyura kusvika pasi kusvika 21 MBps ye4K anoverengeka kuverenga.
AnandTech DAS Suite - Benchmarking yeKushanda Kunowirirana
Yedu nzira yekuyedza yezvikamu zveDAS inotora muchiitiko cheyakajairwa-kesi yemidziyo yakadaro. Mamiriro akajairika ekushandisa kuendesa akawanda mafoto uye mavhidhiyo kuenda uye kubva kuchikamu. Zvimwe zviitiko zvekushandisa zvinosanganisira kushandiswa kweiyo DAS sekurodha pasi kana kuisa nzvimbo yemitambo uye kuendesa mafaera zvakananga kubva kuDAS muchirongwa chekugadzirisa multimedia senge Adobe Photoshop. Vamwe vashandisi vanogona kana kusarudza kubhodhi OS kubva kune yekunze yekuchengetedza mudziyo.
Iyo AnandTech DAS Suite inobata yekutanga yekushandisa-kesi. Iko kuongorora kunosanganisira kugadzirisa matatu akasiyana ebasa.
Yese seti yemutoro wedhata seti inotanga kuiswa mu25GB RAM drive, uye rairobhopy rairo rinopihwa kuti riendese kune iyo DAS pasi pekuyedzwa (yakamisikidzwa muNTFS). Paunenge wapedza kuchinjisa (nyora bvunzo), izvo zvirimo kubva kuDAS zvinoverengerwa kumashure mu RAM drive (verenga bvunzo). Maitiro aya anodzokororwa katatu pabasa rega rega. Verenga uye nyora kumhanya, pamwe nenguva inotorwa yekupedzisa imwe neimwe pass yakanyorwa. Bandwidth yeimwe neimwe seti yedata inoverengerwa seavhareji ese matatu matatu anopfuura.
Blu-ray Folder ReadBlu-ray Folder NyoraMapikicha ReadMapikicha NyoraVideos VerengaVideos NyoraWedzera Zvose
Izvo zvinogona kuoneka kuti hapana musiyano wakakosha munhamba dziri pakati pezvikamu zvakasiyana. Kune ese zvinangwa zvinoshanda, mushandisi wekusazviona haazoona mutsauko pakati pavo munzira yekushandisa zvakafanira Zvisinei, vashandisi vemasimba vangangoda kuchera zvakadzika kuti vanzwisise miganho yechigadzirwa chimwe nechimwe. Kugadzirisa kunetsekana uku, isu takaisa zvakare chirongwa chedu chekuongorora kuona kusagadzikana kwekuita.
Zviitiko zvinokonzeresa kuomarara kwekuita zvinosanganisira SLC caching uye kupisa kwemhepo / firmware makapu pamitengo yekuwana kudzivirira kupisa zvakanyanya. Izvi zvakakosha kune vashandisi vemasimba, sechinhu chekupedzisira icho chavanoda kuona pavanoteedzera pamusoro pezana reGG yedata ndiyo mwero wekuchinjisa unodzikira kune USB 100 kumhanya.
Kuwedzera pakuteedzera iko pakarepo kuverenga nekunyora kumhanya kweiyo DAS kana uchigadzirisa iyo AnandTech DAS Suite, tembiricha yedhiraivho yakanyorwawo pakutanga nekuguma kwekugadziriswa. Muongororo dzapfuura, isu taigara tichiteedzera kutonhora kwese kuburikidza. Nekudaro, isu takaona kuti SMART kuverenga-kwese tembiricha muNVMe SSDs vachishandisa USB 3.2 Gen 2 zambuko machipisi anopedzisira akanganisa zvakashata mitengo yekuchinjisa. Kuti tidzivise dambudziko iri, isu takazvidzivirira pachedu pakunyora tembiricha pamagumo eiyo chaiyo mabasa ekuremerwa akaiswa. Iwo mairafu pazasi anopa data rakanyorwa.
Iwo matatu ekutanga seti yekunyora uye kuverenga zvinoenderana nemifananidzo suite. Gaka diki (rekuchinjisa vhidhiyo suite kubva mukati meSSD kuenda kune RAM drive) inoteverwa nemaseti matatu evhidhiyo suite. Imwe diki RAM-dhiraivha yekumisikidza gap inoteverwa nemaseti matatu eBlu-ray dhairekitori. Chinhu chakakosha kucherechedza apa ndechekuti yega yega yekutanga matatu ebhuruu uye girini nzvimbo inoenderana ne15.6 GB yekunyora uye kuverenga zvichiteerana. Iko kusarongeka kunoratidzwa pamatanho akapfuura eiyo imwecheteyo basa rekuratidzira kuti hapana kupisa kwekushisa kuri kutamba kweiyo SSD. Mhinduro yekupisa mune ese anoita zvakafanana zvakafanana kune zvakajairika basa rekuremerwa - kutenderedza 3C-4C kukwira mukushisa mushure mekupoterera 250GB yekuverenga nekunyora.
PCMark 10 Yekuchengetera Bench - Chaiyo-Nyika Kuwana Matanho
Kune akatiwandei ezvitoro zvekuchengetedza izvo zvinogona kuisa chishandiso kune yekunyepedzera nzira yekuwanikidza nekusiyanisa musanganiswa wekuverenga nekunyora, iwo ekuwana mabhureji masosi, uye mutsetse kudzika / nhamba yezvakakosha data zvikumbiro. Isu takaona mhedzisiro kubva kune maviri anozivikanwa - ATTO, uye CrystalDiskMark - muchikamu chakapfuura. Zvimwe zvakakomba mabhenji, zvisinei, chaizvo anoteedzera nzira dzekuwana kubva kune chaicho-chepasirese chekuremerwa kuona kukodzera kwechimwe chigadzirwa cheimwe basa rekuremerwa. Chaiwo-epasirese nzira dzekuwana dzinogona kushandiswa kuenzanisa maitiro emakomputa zviitiko izvo zvinogumirwa nekuchengetedza kwekuita. Mienzaniso inosanganisira kubhowa sisitimu inoshanda kana kurodha mumwe mutambo kubva ku diski.
PCMark 10bhenji rekuchengetera (rakaunzwa muv2.1.2153) rinosanganisira mabhenji mana ekuchengetedza anoshandisa akakodzera chaiwo-epasirese masosi kubva kune anozivikanwa maficha uye zvakajairika mabasa kuyedza zvizere mashandiro eazvino madhiraivhu azvino:
Iyo Yakazara System Drive Benchmark inoshandisa yakafara-yakatetepa seti chaiyo-yepasirese trace kubva kune anozivikanwa maficha uye zvakajairika mabasa kuyedza zvizere mashandiro eanomhanyisa emazuva ano madhiraivha. Inosanganisira yakazara ye204 GB yekunyora traffic.
Iyo Inokurumidza Sisitimu Yekudhira Benchmark muyedzo mupfupi neiyo seti diki yezvishoma inodzvinyirira chaiyo-yepasirese matanho. Inoisa mudziyo ku23 GB yekunyora.
Iyo Data Drive Benchmark yakagadzirirwa kuyedza madhiraivha ayo anoshandiswa kuchengetera mafaera pane mafomu. Izvi zvinowanzo sanganisira madhiraivhi eNAS, tsvimbo dze USB, makadhi ekurangarira, uye zvimwe zvekuchengetedza zvekunze zvekunze. Iyo chishandiso inoiswa pasi pe15 GB yekunyora.
Iyo Dhiraidhi Performance Consistency Bvunzo ndeyeyakatora-kumhanya uye inodenha zvakanyanya bvunzo ine inorema, inoramba ichienderera mutoro wevashandisi vehunyanzvi. Kupa-kwakadzika kuburitsa kunoratidza kuti mashandiro edhiraivho anosiyana sei pasi pemamiriro akasiyana. Izvi zvinonyora zvinopfuura makumi maviri nematatu TB yedhata kune dhiraivha.
Kunyangwe iyo bhaisikopo rekutyaira data richiratidzika senge rakakodzera kuyedzwa yakanangana-yakachengetedzwa, isu takasarudza kumhanya izere system drive drive bhenji sechikamu chedu ongororo yekuyerera. Vazhinji vedu tinoshandisa inotakurika maficha anotyaira semabhutsu madhiraivha uye kuchengetedza kweMitambo yeSteam. Aya marudzi emashandisirwo-makesi anogadziriswa chete mune yakazara system drive bhenji.
Iyo Yakazara Sisitimu Yekudhira Benchmark ine makumi maviri nematatu matanho. Nechinangwa chekuburitsa mhedzisiro, tinovaisa pasi pezvikamu zvishanu zvakasiyana:
Bhuti: Kudzokorora kwekuchengetedza kwekuwana trace yakanyorwa panguva yekutora Windows 10
Kugadzira: Kudzokorora kwekuchengetedza nzira dzekutsvaga dzakanyorwa panguva yekutanga uye kushandiswa kweAdobe mafomu senge Acrobat, After Effects, Illustrator, Premiere Pro, Lightroom, uye Photoshop.
Hofisi: Kudzokorora kwekuchengetedza nzira dzekuchengetedza dzakanyorwa panguva yekushandisa kweMicrosoft Office kunyorera seExcel uye Powerpoint.
Kutamba: Kudzokorora kwenzvimbo dzekuchengetedza dzekuwana dzakanyorwa panguva yekutanga kwemitambo yakadai seBattlefield V, Call of Duty Black Ops 4, uye Overwatch.
Faira Shanduko: Kudzokorora kwenzvimbo dzekuchengetedza dzekuchengetedza (Nyora-Chete, Verenga-Nyora, uye Verenga-Chete) zvakanyorwa panguva yekuchinjiswa kwedata senge ISOs uye mifananidzo.
PCMark 10 zvakare inogadzira huwandu hwakazara, bandwidth, uye avhareji latency nhamba yekukurumidza kuenzanisa kweakasiyana madhiraivha. Izvo zvidimbu-zvidimbu mune rese peji rinongedzera nzira dzekuwana dzakatsanangurwa muPCMark 10 technical Guide.
Iyo yekuverenga-kunyora bandwidth yakanyorwa kune yega dhiraivha mune boo kuwana trace inoratidzwa pazasi.
Windows 10 BootExpand Zvese
MaSDD ese ari maviri anowanikwa muhafu yepamusoro yechati, uye ari kure nemutungamiri nemhiri kadiki.
Zvekugadzira Basa rekuremerwa
Iyo yekuverenga-kunyora bandwidth yakanyorwa kune yega dhiraivha mune iyo sacr, saft, sill, spre, slig, sps, aft, exc, kurwara, ind, psh, uye psl nzira dzekuwana dzinoratidzwa pazasi.
Kutanga - Adobe AcrobatStartup - Adobe Mushure meMagariroStartup - Adobe IllustratorStartup - Adobe LightroomStartup - Adobe PhotoshopStartup - Adobe Premiere ProUsage - Adobe Mushure meMagadzirisoUsage - Adobe IllustratorUsage - Adobe InDesignUsage - Adobe Photoshop HeavyUsage - Adobe Photoshop LightTambanudza zvese
Mune angangoita ese ekugadzira mabasa, maSSD maviri anoshaya panzvimbo yepamusoro nekazevhuru kune iyo HP Inotakurika SSD P700.
Iyo yekuverenga-nyora bandwidth yakanyorwa kune yega dhiraivha mune exc uye pow yekuwana matanho anoratidzwa pazasi.
Kushandisa - Microsoft ExcelUsage - Microsoft PowerpointExpand Zvese
MaSSD anobuda muhafu yepamusoro zvakare aine imwechete pozi chinzvimbo - zvisinei, iyo HP P700 inoita zvakada kufanana neiyo hofisi yebasa mitoro.
Mitambo Yekuita Basa
Iyo yekuverenga-nyora bandwidth yakanyorwa kune yega dhiraivha mu bf, cod, uye ow yekuwana maratidziro anoratidzwa pazasi.
Kutanga - Hondo Yenhandare VStartup - Kufona kweDuty Nhema Ops 4Startup - Overwatch Wedzera Exp All
Iko kucherechedzwa kunodzokororwa kwemitoro yebasa yemitambo - iwo maSSD maviri ane mutsipa-ku-mutsipa neiyo HP P700 (yekunyora-inorema basa inorema) uye Inokosha Portable SSD X8 (yeavo vanoverenga-inorema).
Mafaira Kutamisa Ekuremerwa
Iyo yekuverenga-kunyora bandwidth yakanyorwa kune yega dhiraivha mu cp1, cp2, cp3, cps1, cps2, uye cps3 nzira dzekuwana dzinoratidzwa pazasi.
Kudzokorora ISOs (Verenga-Nyora) Kudzokorora Mapikicha (Verenga-Nyora) Kuburitsa ISOs (Nyora-Chete) Kuburitsa Mapikicha (Nyora-Chete) Kunze ma ISOs (Verenga-Chete) Kunze Mifananidzo (Verenga-Chete) Wedzera Hwose
Misanganiswa yemabasa inosanganisirwa yakakura saizi saizi inoita kunge inokwira maSDD maviri, asi madhiraivha anobuda munzvimbo yedanda mune imwe faira yekufambisa basa.
PCMark 10 inoshuma huwandu hwakazara zvichibva pane yakacherechedzwa bandwidth uye nguva yekuwana yeiyo yakazara basa rekuisa set. Iwo mamaki, bandwidth, uye avhareji yekuwana latency kune yega yega madhiraivha anoratidzwa pazasi.
Yakazara Sisitimu Yekutyaira Benchmark Bandwidth (MBps) Yakazara System Dhizaina Benchmark Latency (isu) Yakazara System Dhizaina Benchmark Chikamu
Kubva pakuona kwese, iyo SanDisk Yakanyanya Inotakurika SSD v2 uye iyo WD Yangu Pasipoti SSD (2020) inobuda kumusoro neakakosha margin. Izvi zvinonongedzera kune ese-anotenderera mashandiro, nepo mamwe anokwikwidza maSDD akagadziridzwa kune imwe mhando yemutoro webasa chete.
Iko mashandiro emadhiraivha mune akasiyana chaiwo-epasirese ekuwana marara pamwe neyekugadzira mabasa akaunzwa muzvikamu zvakapfuura. Isu takatarisawo kuenderana kwekuita kwenyaya idzi. Vashandisi veMagetsi vanogona zvakare kufarira kuita kusagadzikana pasi pemamiriro ezvinhu akaipisisa, pamwe nekushandisa simba rekutyaira. Iyo yekupedzisira zvakare yakakosha kana ichishandiswa nemabhatiri anoshandiswa nemidziyo yakadai semabhuku ekunyorera uye mafoni. Mutengo zvakare chinhu chakakosha. Isu tinoongorora yega yeizvi mune zvakadzama pazasi.
Chakaipisisa-Chiitiko Chekuita Kubatana
Flash-based chengetedzo zvishandiso inowanzo kudzikira munzira dzisingafungidzirwe kana ichinge yakatarwa nenhamba hombe yezvidiki-zvidiki zvakasarudzika zvinonyora. Mazhinji mabenchmarks anoshandisa iyo scheme kutanga-mamiriro madhivhisi pamberi pekuyedzwa chaiko kuitira kuti uwane yakaipisisa-kesi mumiriri nhamba. Neraki, mitoro yebasa yakadai haina kujairika kune yakanangana-yakanamatira maturusi ekuchengetera, uko mitoro yebasa iri yakanyanya kuenzana mune zvakasikwa. Kushandiswa kweSLC caching pamwe ne firmware firmware kudzivirira kupisa zvakanyanya kunogona kukonzera kudonha pakumhanya kumhanya kana dhivha-yakavakirwa DAS chishandiso iri pasi pekutsigira kwakateedzana kunyorera.
Yedu Sequential Inonyora Performance Consistency Bvunzo inogadziridza chishandiso seyakagomara panyama diski (mushure mekubvisa zvakagadziriswa mavhoriyamu). Fio basa rinotakurwa kuti rinyorwe rakateedzana dhata kune yakasvibira dhiraivha ine block size ye128K uye iodepth ye32 kufukidza 90% yeiyo kugona kugona. Iyo tembiricha yemukati yakanyorwa chero kumagumo ebasa rebasa, nepo pakarepo kunyora mwero wedhata uye huwandu hwakazara hwekunyora dhata huwandu hwakanyorerwa pamasekonzi-masekondi.
Sequential Nyora kusvika 90% yeDisk Kugona - Performance Kubatana
Iyo Yakanyanya v2 inochengetedza kumhanya pakati pe815 - 850 MBps mukati mekunyora basa rese (kusvika ku90% yemagetsi ekutyaira), netembiricha ichipera pa70C. (11C delta). Panyaya yekuita manhamba, ingangoita seyakanyanya PRO kubva ku2019 iyo yaigara pa850 MBps kwese. Iyo My Passport SSD (2020) inotanga nekumhanyisa kwakafanana seiyo Yakanyanya v2, uye inogara imomo kwemasekondi gumi nemashanu (~ 15GB yedata rekunyora), isati yadonhera pasi kutenderera 13 MBps (inotsigirwa mukati mebasa rese). Iyo tembiricha inopera pa670C (76C delta). Kazhinji, munhu angafungidzira kuti iyo 21GB shanduko-pamusoro ndeye mhedzisiro yeSLC caching, asi kusavapo kwedombo muExtreme v13 kunongedzera kune chimwe chinhu - iyo SanDisk Extreme v2 ine zvishoma yakanyanya kupisa simba ichienzaniswa neMy Passport SSD ( 2). Izvi zvinobvumira bundu rakakwira zvishoma mukuita kwekutanga. Mune mamwe mazwi, Western Dhijitari inoshanda zvakanyanya mukukanda iyo My Passport kana paine mukana wekukurumidza kupisa tembiricha.
Mota-dzinofambiswa nemabhazi dzinogona kuzvimisikidza kuti dzishande mukati mezvinetso zvekutakura magetsi zvechiteshi chevagari. Nepo Thunderbolt 3 chiteshi chakavimbiswa kuendesa kusvika ku15W yezvigadzirwa zvevatengi, USB 2.0 chiteshi chakavimbiswa kuendesa chete 4.5W (900mA @ 5V). Muchirevo chechinyorwa chino, zvinonakidza kuve neakanaka-akatarisisa kutaridzika kwesimba rekushandisa kwesimba remadhiraivha akasiyana siyana. Uchishandisa iyo pluggable USBC-TKEY, iyo bhazi simba mashandisirwo emadhiraivha akateedzerwa panguva yekugadzirisa iyo CrystalDiskMark basa rekuremerwa (rakaparadzaniswa nemakumi matatu epakati). Iwo mairafu pazasi anoronga ipapo ipapo simba rebhazi kushandiswa kurwisa nguva, nepo ichisarudzira iwo akanyanya uye mashoma mashoma simba rekushandisa manhamba.
Iwo maviri maSDD wachi ari pakati pe2.1W ne5W yemitoro yebasa. Aya haasi iwo anoshanda nesimba ekunze maSSD, sezvo iyo Samsung T7 Touch inoshanda pakati pe0.6W ne4W yemitoro yakafanana yebasa. Idzi nhamba dzakanakira kushandiswa nema desktops uye epamusoro-mashandiro emabhuku, asi chinhu chinoda kuchengetwa mundangariro kana uchivashandisa nenhare mbozha nemapiritsi.
Mutengo wemagetsi-anochengeterwa zvigadzirwa anowanzo shanduka zvakati wandei nekufamba kwenguva. Nekudaro, musiyano uripo pakati pemamodeli akasiyana kazhinji hauchinje. Tafura iri pazasi inopfupisa izvo zvinongedzo zvechigadzirwa uye mutengo wemayuniti akasiyana akurukurwa mukuwongorora.
Kunze Flash Kuchengeta Midziyo - Mutengo
chigadzirwa Model Number Mano (GB) Street Price (USD) Mutengo weG GB (USD / GB)
Inokosha Portable SSD X8 1TB CT1000X8SSD9 1000 $150 0.15
WD Pasipoti yangu SSD (2020) 1TB WDBAGF0010BGY-WESN 1000 $150 0.15
HP P700 1TB 5MS30AA # ABC 1000 $175 0.175
Lexar SL100 Pro 1TB WDC100P-1TBRBNA 1000 $190 0.19
Samsung Portable SSD T7 Kubata 1TB MU-PC1T0S / WW 1000 $190 0.19
SanDisk Yakanyanya Pro Portable SSD 1TB SDSSDE80-1T00-A25 1000 $190 0.19
SanDisk Yakanyanya Inotakurika SSD v2 1TB SDSSDE61-1T00 1000 $240 0.24
Iyo WD Yangu Pasipoti SSD (2020) inopa yakanakisa kukosha kwemari. Mutongo uri paSanDisk Yakanyanya Inotakurika SSD v2 inogona kupihwa chete mushure mekunge mutengo wemugwagwa wazivikanwa. Izvo zvakati, kunyangwe dai yaive $ 200, tinogona kutaura kuti mashandiro uye kuenderana kwakakosha.
Mushure mekuongorora kwakanyatso tarisa kwenzvimbo dzakasiyana (kusanganisira mabenchmark manhamba, tembiricha, simba rekushandisa, uye mutengo), zviri pachena kuti iyo WD My Passport SSD (2020) uye SanDisk Extreme Portable SSD v2 ese ari maviri sarudzo dzakanaka dzakasiyana siyana dzekushandisa. Nekudaro, sezvo chirevo chichienda - mumwe haakwanise kuve nekeke uye nekuzvidya futi. MaSDD ese ari maviri anounza mashandiro uye kusagadzikana pamutengo wekuwedzera kwesimba kwesimba uye tembiricha yakakwira zvishoma. Kugadziridza iwo mametric kunoreva kurasikirwa kunze kwezvinhu zvinounza kugutsikana nekukasira - kuendesa kunoitwa nekukurumidza pasina kumisidzana. Nekudaro, iwo chaiwo metric anogona kuzopedzisira ave ekukosha kunetseka mune mamwe mamiriro. Naizvozvo, sarudzo chaiyo inoenderana neshandiso-kesi. Zvichienderana nemiyedzo yedu, SanDisk Yakanyanya Inotakurika SSD v2 zvinobudirira zvinoshandisa izvo zvido zvevanogadzira zvemukati vanofanirwa kuishandisa mumunda (nekutenda kune yayo carabiner loop, IP55 chiyero, uye 2m kudonhedza kudzivirirwa). Iyo WD Yangu Pasipoti SSD (2020) iri nani inokodzera kune yakasarudzika imba / bhizinesi mushandisi.
Iyo SanDisk Yakanyanya PRO Inotakurika SSD (2019) modhi inoenderera ichive yedu yatinofarira / yakakurudzirwa inotakurika SSD chero bedzi isiri EOL-ed. Iko kushandiswa kweiyo yepamusoro-yekupedzisira SSD (isiri-DRAM-shoma) uye iri nani yekupisa mhinduro muyuniti inovimbisa kuti inodarika iyo SanDisk Extreme v2 uye My Passport SSD pamatanho ese metriki kunze kwekushandisa simba. Kunyangwe paine mutengo wekutengesa we $ 200 yeiyo nyowani 1TB Extreme v2, e-tailers varikutengesa pa $240. Iyo premium haina kururamiswa sekureba sekunge iyo $ 190 Yakanyanya PRO (2019) inowanikwa mumusika. Kana mutengo wemugwagwa watanga kusvika pa20c / GB mucherechedzo, iyo SanDisk Yakanyanya Inotakurika SSD v2 inokwira kunzvimbo yechipiri. Iyo WD Yangu Pasipoti SSD (2020) inokurudzirwa kune vakajairika vashandisi vasingade iyo IP55 chiyero uye vanoda ine mari asi inoshamisira inotakurika dhiraivha. Kunyangwe kana kuita kwayo kusaenderana kusingaenderane neiyo Yakanyanya v2, kukosha uye kuita kwesarudzo kwakasimba chaizvo kana zvichienzaniswa nedzimwe sarudzo mumusika.
Yakanakisa yekunze hard drive yePS4: Iwo epamusoro PlayStation 4 anotyaira kubva ingori £ 60
Yakanakisa yekunze hard drive yePS5: Iyo yakanakisa PlayStation 5 inotyaira kubva ingori £ 65